Vashandi - Prairie State Legal Services
Prairie State Legal Services inoumbwa nezvinopfuura 200 vashandi nhengo iri munzvimbo yedu yese ye36-County sevhisi.
MUTungamiriri weRuzivo Technology
Mutungamiri weHuman Resources
mutevedzeri wemukuru weMatare
DIRECTOR Wepurogiramu yekuvandudza
mutungamiriri wekudzidzisa kwekudzivirira & mabasa ekuzvipira
director wePro Bono services
Mutungamiriri weVictim Services
dombo chitsuwa Hofisi
Denise Conklin ndiye Executive Director wePrairie State Legal Services. Akatanga basa rake kuPrairie State seGweta Rokuzvipira muPeoria Office yedu 2004 uye akazova Staff Attorney muna 2007. Denise akazova Managing Attorney muna 2009.
Asati ajoina Prairie State, Denise akashanda seMubatanidzi Mukuru muLitigation department reKatten Muchin Rosenman law firm muChicago, Illinois. Akapedza kudzidza Magna Cum Laude aine degree reJuris Doctor kubva kuYunivhesiti yeIllinois College yeMutemo muna 1997. Akagamuchira Bachelor of Arts muChirungu Literature kubva kuYunivhesiti yeIllinois Urbana-Champaign muna 1994.
Denise anotenderwa kuita mutemo muHurumende yeIllinois uye muUnited States Dare reDunhu reKumaodzanyemba neCentral Dunhu reIllinois. Maitiro ake anotarisa pazvinhu zvese zvemutemo wehurombo, kusanganisira mutemo wemhuri, mabhenefiti ehurumende, mutemo wezvedzidzo, uye mutemo wedzimba.
Jean anounza anopfuura makore makumi matatu eruzivo rwezvemari mumaindasitiri akati wandei, anosanganisira kudhinda, kugadzira mota nechikafu, hutano hwehutano, accounting nekupa mazano. Iye ane basa rekutonga kwese kwePSLS mashandiro emari, anosanganisira Kurevera Kwemari, Kubhadhara uye Benefits Management, Budget Preparation uye Chirongwa Kubika, uye Property uye Inishuwarenzi.
Nguva pfupi yadarika, Jean akashanda kuMercyHealth muRockford, IL semutariri wekudzosera mari muDhipatimendi ravo reMari. Akamboshanda kwemakore matanhatu seMudzori / Mutungamiriri weRevenue Cycle yeRockford-based non-profit, Rosecrance Health Network.
Jean akagamuchira Bachelor of Science degree muAccounting and Organizational Administration kubva kuOklahoma State University, uye MBA yake kubva kuNorthern Illinois University.
Jerry Dombrowski - Director weRuzivo Technology
Jerry Dombrowski ndiye Director weRuzivo Technology (IT). Iye anotarisira ese matunhu ekomputa, network, cybersecurity, uye IT zviwanikwa. Jerry akatanga basa rake kuPrairie State muna2014 segweta revashandi rinotarisa dzimba nedzimba dzekudzinga. Iye akabva achinjira kuita Director weIT basa achishandisa rake rakakura kumashure muIT. Pakutanga, Jerry akashandira iyo Rockford Park District, Northwestern University's IT department reYunivhesiti Kunyoresa, Mosaic Technologies, uye Barbara Olson Center yeTariro.
Jerry anobata Bachelor yeSainzi muRuzivo Systems Management kubva kuElmhurst University uye JD anobva kuNorthern Illinois University.
Jessica Hodierne - Director weVashandi
Jessica Hodierne ndiye Director weHuman Resources. Iye anotungamira Prairie State's zviwanikwa zvevanhu marongero, zvirongwa, maitiro, uye zvinangwa zvinopa mushandirwi-anotarisisa, yakakwira mashandiro tsika inosimbisa kupihwa simba, mhando, kugadzirwa, kuzadziswa kwezvinangwa, nekutora, kuchengetedza uye kusimudzira kusimudzira kwevashandi vepamusoro.
Jessica akabatana nePrairie State Legal Services muna2012 seAmeriCorps VISTA muhofisi yedu yePeoria, Ikoko, akagadzira kudyidzana kwehofisi neyekurapa kwekutanga pamwe neFederalally Qualified Health Center uye akamiririra vatengi mukutongwa kwekutongwa. Akazoshandura kuita chinzvimbo cheManeja maneja uye akatarisa zvipo zvikuru zvemuhofisi, mashandiro ehofisi, nekubata mabasa emunharaunda. Akapihwa basa saDirector weHuman Resources muna 2018.
Jessica anobata Bachelor of Arts muKutaurirana kubva kuWestern Illinois University uye iSosaiti yeHuman Resources Management Certified Professional.
Jenn Luczkowiak - Director weDziviriro
Jenn Luczkowiak ndiye Director weDevelopment. Iye anotarisira kushambadza nekutaurirana kuyedza uye kuita mari yekuedza kubva kune vamwe, vemakambani, uye vadiki hwesheni vanopa.
Jenn akamboshanda sePrairie State Legal Services 'Project Director weMutemo Rubatsiro rweVaridzi Vepamba Purojekiti kuPSLS, iyo yaipa rairo yezvemitemo nekumiririra varidzi vedzimba uye maroja akatarisana nekufukurirwa. Asati asvika kuPSLS, Mai Luczkowiak vakashandira Law Foundation yeSilicon Valley vachishandira vechidiki vasina pekugara uye vatiza seEqual Justice Work Fellow uye Staff Gweta. Akagamuchira BA yake kubva kuNorthwestern University uye iye JD kubva kuYunivhesiti yeCalifornia, Hastings College yeMutemo.
Katie Liss - Mutevedzeri weMukuru weMatare
Katie Liss anga ari Mutevedzeri weMutevedzeri weKutonga kwePrairie State Legal Services kubva muna July 2021. Anobatsira Mutungamiriri weDare reMitemo kuti ape hutungamiri nekutarisa kwepurogiramu-yepamusoro-soro mabasa emutemo uye anopa rubatsiro rwekukwidzwa kwemhosva uye nyaya dzakaoma. Katie akatanga basa rake seSenior's Project Staff Attorney kuhofisi yeWaukegan yePrairie State kubva 2008-2011. Akashandira Ascend Justice segweta remutemo wemhuri uyezve kwemakore akati wandei segweta repamusoro muLegal Aid Chicago's Consumer Practice Group, uko maitiro ake aisanganisira kubhuroka, kudzivirira kuvharirwa, nyaya dzechikwereti chevadzidzi, uye chitsotsi chevatengi. Kubva munaKurume 2020-Chikumi 2021, Katie akashanda seDirector weAnti-Predatory Lending Database ("APLD"), Zvichemo zveVatengi uye Kuferefeta kweI Illinois Dhipatimendi reMari uye Professional Regulation.
Katie akaita shanduko dzakaunza kuzvidavirira kwakawanda kuAPLD uye akabatsirawo mukugadzirwa kwemutemo mutsva wehurumende uyo unokurudzira maitiro akachengeteka ekukweretesa kwembavha nemasangano emari anodzorwa nehurumende kunharaunda dzine mari yakaderera uye ine mwero.
Katie aimbova sachigaro, mutevedzeri wasachigaro uye muratidziri weChicago Bar Association's Consumer Law Committee. Iye akapedza kudzidza kuUW-Madison uye Loyola University Chicago School of Law.
Sarah Megan - Director weLitigation
Sarah Megan ndiye Director weLitigation yePrairie State Legal Services, Inc. Mai Megan vane makore anopfuura makumi matatu nemasere ekubata mudzimba, rubatsiro rweveruzhinji, uye nedzimwe nyaya dzemutemo wehurombo. Pamusoro pekumiririra vatengi mumatare akaomarara mudare redzimhosva nehurumende, Muzvare Megan vanga vari mutariri wematare kwemakore anodarika makumi maviri nemanomwe, vachibatsira chirongwa chedu chepamutemo chekubatsira magweta makumi mapfumbamwe nematanhatu nematare epamutemo nematare uye mapurojekiti akakosha anofukidza akasiyana siyana emitemo. nyaya dzinobata varombo, vakaremara nevakwegura, kusanganisira dzimba, hutano, mhuri, dzidzo, uye nyaya dzevatengi. Muna 38, Muzvare Megan vakagashira kuzivikanwa kwenyika nebasa ravo, semugashiri weNational Legal Aid uye Defender Association's Reginald Heber Smith Mubairo, vachiona mabasa akazvipira uye kubudirira kunoshamisa kwemagweta ehurumende kana evarombo pavanoshandirwa nemasangano anotsigira mabasa akadaro. Mme Megan akapedza kudzidza paGrinnell College uye University yeIowa Law School.
Gail Tilkin Walsh - Director wePurogiramu Kubudirira.
Gail Tilkin Walsh ndiye Director weChirongwa Chekuvandudza kuPrairie State Legal Services. Pachinzvimbo ichi anovandudza mazano ekuti aendeswe sevhisi, anotungamira kuongororwa kwezvinodiwa pamutemo, kugadzirira mafomu ekupa rubatsiro uye mishumo, uye anoshanda nechikwata chake kuti vatarisire maitiro edu ekugadzirisa nyaya uye zvizhinji zvekupa kwedu rubatsiro.
Gail akatanga basa rake nePrairie State muna1979 semumiriri wezvematongerwo enyika neVakuru veVatambi veMutemo Services muhofisi yedu yePeoria. Akagara makore gumi nerimwe achifamba musangano redu rese uye achishanda mumahofisi edu eBloomington, Rockford neOttawa munzvimbo dzakadai seCommunity Legal Education Coordinator, Pro Bono Coordinator, direct service paralegal, uye hofisi maneja maneja.
Gail akasiya Prairie State muna 1990 kuti aite Master's Degree muSocial Work kubva kuYunivhesiti yeIllinois-Urbana aine tarisiro yekushandira vakura. Akazoshanda paMental Health Center yeChampaign County achitarisa kuvakwa kwedzimba dzevanhu vane chirwere chepfungwa ndokuzobatana nenzvimbo yeUnited Way kwaaiitisa zviongororwa pamwe nekuronga kuronga. Akadzokera kuPrairie State kunzvimbo yake yazvino muna 1995.
Linda Rothnagel - Mutungamiriri weAdvocacy Training uye Volunteer Services
Linda Rothnagel ndiye director weAdvocacy Training uye Volunteer Services yePrairie State Legal Services. Iye anoona nezve mutsva mushandirwi maitiro kune ese emahofisi ePrairie State kumatunhu makumi matatu nematanhatu; iye anoronga Prairie State's MCLE chirongwa chevashandi uye vanozvipira; uye anoshanda nemagweta mhiri kwePrairie State pazvinhu zvevatengi. Linda anochengetedzawo rake ega ega nyaya yevatengi, anobatsira nekutarisa basa repamutemo revashandi vemuhofisi yePrairie State kuMcHenry, uye kubva Zvita 36 ave nebasa rekuronga Prairie State pro bono kuedza.
Linda akashanda saMutungamiriri weAdvocacy Training kubva muna Ndira 2008. Akambotungamira hofisi yedu yeWaukegan kwemakore makumi maviri nemaviri uye hofisi yeOttawa kwemakore maviri. Chiitiko chake chinosanganisira kumiririrwa kwevatengi mumhando dzakasiyana dzemutemo wemhuri, dzimba, kufumurwa, mutengi, Kuchengetedzwa Kwemagariro, uye nerubatsiro rweveruzhinji; akabata nyaya kumatunhu ehurumende nemumatare edzimhosva, padare redzimhosva rekukwirira, uye pamberi pevamiriri vazhinji vehutongi.
Linda akapedza kudzidza kuMiddlebury College uye University of Michigan Mutemo Chikoro. Iye ndiye anokunda iyo Illinois State Bar Association's 2019 Joseph R. Bartylak Memorial Legal Service Award.
Kim Thielbar - Director wePro Bono Services
Kim Thielbar ndiye Director wePro Bono Services. Iye anobatsira kuongorora, kuronga uye kuwedzera chirongwa chePrairie State chirongwa chebono bono uye nekubatanidza vanozvipira nevatengi vanoda rubatsiro rwakakosha rwevamiriri vezvemitemo.
Kim akashanda kuPrairie State Legal Services kubvira 2013, kutanga seGweta revashandi muhofisi yeRockford, uyezve seManeja wemuhofisi iyeye mu2015. Akapihwa basa seMutungamiriri wePro Bono Services mu2019. Asati ajoina Prairie State, Kim akashanda sePublic Interest Fellow kuUqueld for Equality muChicago, achishanda muK Special Education Clinic.
Muna 2016, Rockford Chamber of Commerce yakasarudza Kim mumwe we "40 Vatungamiriri Vane Makore makumi mana." Muna 40, RAMP Center for Independent Living yakapa Kim mubairo we "Wechidiki Mumiriri wegore" mubairo. Muna 2017, iyo Rockford Nyorera Nyeredzi profiled Kim sechikamu cheayo "Inotevera Up" akateedzera yakanangana nevatungamiriri vemangwana eRock River Valley.
Kim akagamuchira dhigirii repaygraduate kubva kuYunivhesiti yeMichigan, uye degree remutemo kubva kuLoyola University kuChicago.
Dave Wolowitz - Batanidza Director
Dave Wolowitz ndiye Mubatanidzwa Director wePrairie State Legal Services. Basa rake rinosanganisira kutarisa, manejimendi, uye kuona kwemamwe mapurojekiti; manejimendi evatariri vezvirongwa uye zvikamu zvakasarudzika; kupa zviwanikwa zviri pamutemo kugweta uye vashandi vepamutemo munzvimbo dzinoverengeka dzekudzidzira; vashandi kukura kwehunyanzvi; kupa zvikumbiro uye mabhajeti, zvibvumirano uye zvimwe zvibvumirano zvakanyorwa nevatengesi vekunze, vadiki, vanopa mari uye vanobatirana navo; inoshuma uye kubatana nevabatsiri; hukama hwakasiyana hwehukama uye kuendesa; kuvandudza / kuita kwehurongwa hwehurongwa, maitiro uye masisitimu; tsigiro ye Executive Director uye mamwe mabasa ehutongi, anosanganisira kuhaya / kutora vanhu, nyaya dzevashandi, mutemo uye kutevedzera chibvumirano; uye kutsigira kwakananga kuPSLS Board of Directors nehutongi hwayo.
Dave akabatana nePSLS payakavambwa muna 1977, aimbove Executive Director weLegal Aid Bureau yeKane County. Akave Associate Director kubvira 2008 uye akamboshanda saDirector weSpecial Projects (1988-2008), Deputy Director weLitigation (1984-1988), uye Managing Gweta reSt. Charles Office (1977-1984). Kubva 2000-2008, Dave akadzidzisa hunyanzvi hwematareji kune wechipiri- uye wechitatu-gore-gore vadzidzi vevadzidzi kuNorthern Illinois University College yeMutemo kubva 2000-2008.
Dave anotenderwa kuDare Repamusorosoro reIllinois, matare emubatanidzwa eNorth District, Central District, uye Seventh Circuit Dare redzimhosva. Iye inhengo yeAmerican Bar Association, Illinois Bar Association, uye neDuPage County Bar Association. Zvinyorwa zvake zvinosanganisira co-kunyora Mitemo uye Zvirongwa zveVanhu Vakaremara uye Bhuku reVakuru veVanhu (munyori uye mupepeti).
Dave akagamuchira yake JD uye BA kubva kuYunivhesiti yeIllinois Champaign-Urbana.
Kathy Bettcher - Dhairekita weVanhu Vanotambura
Kathryn Bettcher akapedza kudzidza kubva kuNorthern Illinois University College yeMutemo muna 1991 uye akapiwa rezinesi kuIllinois gore rimwe chete. Mme Bettcher vakashandira Prairie State Legal Services kubvira 1991, kutanga segweta revashandi. Kubva 2005 kusvika 2020 akashanda semaneja maneja wehofisi yeFox Valley. Mme Bettcher ikozvino Director weFamily Advocacy uye vanotarisa kumatare ematare emhuri kumahofisi ePrairie State. Amai Bettcher vakaisa basa ravo mumutemo wemhuri, uye kunyanya mukumiririra avo vakashungurudzwa mudzimba. Akamiririra vatengi vazhinji mukupokana kwekunzwa uye kuyedzwa kwemitemo yemhuri. Iye zvakare akashanda semutariri wePrairie State chirongwa chemhirizhonga mudzimba chiri kuKane County Courthouse. Mai Bettcher vanozivikanwa semutungamiri pakati pevatsigiri vemhirizhonga mudzimba nemagweta muKane County. Mai Bettcher zvakare vane ruzivo rwekumiririra vatengi mune zvimwe zvinhu zvakaita sekudzingwa uye zvirevo zvevakaremara zveSocial Security.
Ketura Baptiste - Managing Gweta, Kankakee Hofisi
Ketura Baptiste akatanga basa rake kuPrairie State Legal Services mu2007 kwaakashanda seGweta revashandi asati ava Managing Gweta reHofisi yedu yeKankakee mu2013. Ketura anozivikanwa muMutemo Mutemo, akagamuchira BA yake kubva kuYunivhesiti yeWashington kuSt. kubva kuLoyola University Chicago Chikoro cheMutemo, muChicago, IL.
Adrian Barr - Managing Gweta, Bloomington Hofisi
Adrian Barr ndiye Gweta Rinotungamira reBloomington Hofisi yedu. Iye anotarisira kuendeswa kwemasangano epamutemo ehurumende uye pro bono masevhisi kune vanhu vane mari shoma uye vakuru mu McLean, Livingston, uye Woodford mataundi.
Adrian akatanga basa rake kuPrairie State Legal Services mugore ra2001 segweta revashandi muSt.Charles Hofisi yedu apo aibata muridzi wemba, muripo weveruzhinji, nemhosva dzekuremara. Mushure memakore mashanu mune iro basa, Adrian akabatana naKingery Duree Wakeman & O'Donnell, kambani yemutemo yePeoria, kwemakore matatu.
Munguva yake ari muchivande tsika Adrian akabata akati wandei pro bono kesi yePrairie State. Akadzokera kuPrairie State muna 2011, achishumira munzvimbo yake yazvino.
Adrian akagamuchira mibairo yakati wandei: Iyo Chicago Bar Foundation Sun-Times Veruzhinji Inofarira Mutemo Kushamwaridzana mu2016, iyo Yevana Imba + Rubatsiro Blue Bow Mubairo weKudzivirira Kushungurudzwa Kwevana mu2017, Illinois Wesleyan University Civic Engagement Mubairo muna 2018 uye ne2020 Lincoln Mubairo. of Excellence. Anoshanda kuIraily Prairie Community Foundation; uye Iyo Immigration Project, sangano risingabatsiri muBloomington rinopa vanoenda kune dzimwe nyika mabasa anodhura ekupinda munyika.
Adrian akagamuchira degree rake repaygraduate uye degree rake remutemo kubva kuYunivhesiti yeIllinois kuUrbana-Champaign.
Paul Zukowski - Managing Gweta, Woodstock Hofisi
Paul Zukowski ndiye Gweta Rinotungamira rehofisi yeWoodstock kuPrairie State Legal Services. Akabatana nePrairie State seye gweta revashandi mu2012, mushure memakore gumi nemashanu ari muchivande tsika, uye ndokuva Managing Gweta mu15.
Paul anoisa nyaya yake pamutemo wemhuri, achisimbisa nyaya dzinosanganisira mhirizhonga mudzimba. Akagamuchira mubairo weRunyararo neRuramisiro kubva kuTurnning Point, musangano wemunharaunda wekusimudzira mhirizhonga mudzimba, muna2016. Ndiye aimbove Mutungamiriri weFamily Law Chikamu cheMcHenry County Bar Association uye ndiye Anotungamira chirongwa che22nd Judicial Circuit's Divorce Early Resolution Chirongwa. Paul ari zvakare anoshingairira kutora chikamu munharaunda yenetiweki yevanopa rubatsiro sevanhu, senge United Way, iyo 22nd Judicial Circuit Mhuri Mhirizhonga Inoratidzira Kanzuru, iyo Kuenderera kweKutarisira Kupedza Kushaiwa Musha, uye Bhodhi revatungamiriri reVatengi Kiredhiti Kiredhi Kuraira Service yeNorth. Illinois.
Paul akagamuchira BA yake kubva kuCarleton College uye JD kubva kuLoyola University Chicago Chikoro cheMutemo.
Thomas Dennis - Maneja Gweta rePeoria/Galesburg Hofisi
Thomas Dennis parizvino anoshanda seManaging Gweta rehofisi yedu yePeoria/Galesburg. Akabatana nePrairie State Legal Services muna 2013 seGweta reVashandi. Mushure memakore matatu ebasa nePrairie State, Thomas akabatana neTazewell County State's Attorney's Office seGweta reMubatsiri weNyika. Thomas akadzokera kuPrairie State muna 2017 kwaakananga kubasa rekubatsira veruzhinji, kunyanya Social Security Disability uye nyaya dzedzidzo. Kubva 2020, Thomas akashanda seGweta Rinotarisira muPeoria/Galesburg Hofisi. Muna Kubvumbi 2022, akave Maneja Gweta rePeoria/Galesburg Hofisi.
Thomas anobvumirwa kudzidzira mutemo muState of Illinois uye muUnited States District Court yeCentral District yeIllinois. Akagamuchira JD yake kubva kuYunivhesiti yeArizona College yeMutemo, uye BS yake kubva kuArizona State University.
Andrea DeTellis - Managing Gweta, Joliet Hofisi
Andrea DeTellis ndiye Gweta Rinotungamira reJoliet Hofisi yedu. Iye akapedza kudzidza kuYunivhesiti yeName Dame uye akamugashira JD kubva kuLoyola University Chicago. Andrea anobata marezinesi emabhawa muIllinois neCalifornia bhawa, uye zvakare akarambidzwa muNorth District yeIllinois uye neEastern District yeCalifornia. Akave ari kuPrairie State kubvira 2013.
Andrea akatanga basa rake repamutemo saMubatsiri weGweta reHurumende muMcLean County, Illinois. Akazoshanda muUS Army mumunda wehungwaru hwemauto uye akashandawo sedangamendi fakitori yekudzidzisa makirasi epamutemo padanho repashure. Aidzidzira muCalifornia munzvimbo dzedzidzo, mhirizhonga mudzimba, dzimba, basa, nerubatsiro rweveruzhinji. Munguva yake muCalifornia akatarisa zvakanyanya pamusiyano wedzidzo pakati pevana vemavara.
Andrea ari zvakare mubati-sachigaro weRacial Justice Initiative muPrairie State. Akanyora chinyorwa cheiyo Shriver's Center Clearinghouse Ongororo uye co-akanyora chinyorwa cheiyo MIE Chinyorwa. Akamboshanda saMunyori weBlack Bar Association yeWill County uye parizvino anoshanda seMutungamiri. Uye zvakare, anoshanda kuLawyer's Trust Fund Nyika Yese Diversity uye Inclusion Working Group. Iye zvakare ari nhengo ye Illinois State Bar Association, iyo Will County Bar Association, uye Will County Yevakadzi Bar Association.
Sam DiGrino - Managing Gweta, Waukegan Hofisi
Sam DiGrino ndiye Gweta Rinotungamira rehofisi yedu yeWaukegan. Akabatana nePrairie State Legal Services muna 2007 seGweta revashandi, uye akapihwa basa muna2012 kuti atungamire Prairie State's Foreclosed Defense Programme asati ave Managing Gweta muna 2014.
Sam akamiririra vatengi mune dzimba, mutengi, mhuri, matunhu, uye dzidzo panguva yake kuPrairie State. Akawana degree rake repaygraduate kubva kuWinona State University muWinona, Minnesota, uye degree rake remutemo kubva kuJohn Marshall Law School muChicago, Illinois.
Don Dirks - Managing Gweta, Ottawa Hofisi
Pamusoro penguva yaDonald Dirks, Jr anopfuura makore matatu-gumi basa kuPrairie State Legal Services, akashanda seGweta revashandi kubva muna 1987-1998 uye akashanda seManeja Gweta reOttawa Hofisi kubva 1997.
Donald akagamuchira BA yake kubva kuIllinois Wesleyan University uye JD kubva kuNorthern Illinois University College yeMutemo. Iye nhengo yedare reStarved Rock Cycling Association uye nhengo yebhodhi yeRide Illinois.
Gretchen Farwell - Managing Gweta, Rock Island Hofisi
Gretchen Farwell ndiye gweta rinotarisira rehofisi yeRock Island. Akatanga basa rake kuPrairie State segweta revashandi muna 1991 asati ave Managing Gweta muna1996. Akasimudza zvakare reMutemo Mutemo Task Force kwemakore mazhinji. Gretchen anotarisa maitiro ake pamutemo wemhuri, mutemo wevakuru, uye mutemo wezvemba. Chinyorwa chake, "HIV / AIDS uye Vachiri Kuyaruka: Zvinotarisirwa neMitemo Yezvikoro, " yakabudiswa mu Zvinyorwa zveMutemo uye Dzidzo muna 1991.
Gretchen ave achibatanidzwa neContinuum yeKuchengeta kubvira payakatanga, uye anga ari nhengo refu yeM-timu yevakuru Kushungurudzwa. Iye zvakare ave achibatanidzwa ne14th Judicial Circuits Whiteside County uye Rock Island County Mhuri Mhirizhonga Makanzuru uye akashanda senhengo yedare reCommunity Service Sarudzo.
Gretchen akapedza kudzidza Cum Laude kubva kuNorthern Illinois School of Law muna 1991 ndokumugamuchira B.s.Ed kubva kuIllinois State University muna 1984. Akadzidzisa vana vakaremara kuMedgar Evers Elementary School kubva muna 1985-1988.
Melissa Fuechtmann - Managing Gweta, Telefoni Counselling
Melissa Sobol Fuechtmann akabatana nePrairie State Legal Services segweta rekupa zano nhare muna 2006 uye akazova Gweta Rinotungamira reTerefoni Counselling Service muna 2017. Segweta rezvekupa nhare, Muzvare Fuechtmann vanopa rairo yezvemitemo uye kuendesa pane akasiyana eruzhinji nyaya dzevanhu, kusanganisira dzimba, mhuri, mutengi, uye neruzhinji mabhenefiti. Iye anotarisira mashandiro ezuva nezuva eTelefoni Counselling Service, kusanganisira kutarisa uye kutsigirwa kwemagweta uye nyanzvi dzekudya. Iye zvakare anotarisira tekinoroji inoda kune yevatengi kufona nzvimbo uye online application. Mme Fuechtmann akapedza kudzidza kubva kuDePaul University College yeMutemo uye akapiwa rezinesi kuIllinois muna 2005.
Jesse Hodierne - Managing Gweta, Rockford Hofisi
Jesse Hodierne akagamuchira chiremba wezvemitemo kubva kuSouthern Illinois University Chikoro cheMutemo muna 2012. Panguva yemutemo chikoro, Jesse akashanda kuLand yeLincoln Legal Assistance Foundation pane zvakasiyana nyaya dzemutemo. Mu2012, Jesse akabatana nePrairie State segweta revashandi uye akazove manejimendi wePrairie State's Legal Rubatsiro rweVaridzi vePamba Project apo akaisa maitiro ake mumiririri wevatengi akakanganiswa nekufungidzirwa uye zvine hukama nenyaya dzevatengi. MunaNovember 2019, Jesse akava Managing Gweta rePrairie State's Rockford Office.
Marisa Wiesman - Gweta Rinotungamira, West Suburban
Marisa Wiesman ndiye Managing Gweta rePrairie State Legal Services 'West Suburban hofisi. Asati atora basa iri muna 2016, akashanda saPrairie State Director weVazvipiri Services; gweta rinotarisira hofisi yePrairie State yeKankakee; uye gweta revashandi muhofisi yePrairie State's Rockford.
Asati ajoina Prairie State, Marisa akanyorera Honourable Marilyn Brown Rosenbaum muMinnesota's Fourth Judicial District. Iye inhengo yeIllinois Access to Justice Commission's Procedural Fomu Subcommittee uye Remote Appearance Committee; iyo Illinois State Bar Association's Standing Committee pane Kuunzwa kweMutemo Services; iyo yegumi nemasere Dare redunhu Pro Bono Komiti; iyo Impact DuPage Inotungamira Komiti; uye nePublic Interest Law Initiative Bhodhi revatungamiriri. Iye anogamuchira 18 weChicago Bar Foundation Sun-Times Veruzhinji Inofarira Mutemo Kushamwaridzana.
Marisa akamugashira JD cum laude kubva kuYunivhesiti yeMinnesota Law School, uye iye BA magna cum laude kubva kuMacalester College.